Vaovao - Maninona no mifidy tavoahangy plastika?
Fa maninona no mifidy tavoahangy plastika?
Ao amin'ny tsenan'ny fonosana, na izany aza tavoahangy fanosotra kosmetikamiovaova ny fitaovana famonosana, ny tavoahangy plastika famaohana safidy voalohany ho an'ny mpanjifa misafidy tavoahangy famaohana. Fa maninona no tian'ny mpanjifa tavoahangy plastika rehefa misafidy tavoahangy famafazana izy? SATRIAtavoahangy plastika manana ireto tombony manaraka ireto ho an'ny mpanjifa:
1. Fitaovana plastika, maivana kokoa ary mora ampiasaina kokoa;
2. Raha ampitahaina amin'ny tavoahangy fitaratra sy vera, tavoahangy plastika dia mora kokoa ny mamorona sy manamboatra vokatra ilain'ny mpanjifa mora kokoa;
3. Ny vidiny dia somary ambany noho ny fitaovana hafa, ary ny kilasy famonosana dia tsy very;
4. Raha ampitahaina amin'ny fitaovana hafa, dia somary marefo kokoa ilay spray. Koa satria malefaka kokoa ilay plastika, dia hihena ny vatan'ny tavoahangy rehefa mamafy, mamorona hery fefy, mahatonga ny spray ho malemy kokoa sy lava kokoa;
5. Tsy dia mirona amin'ny famoahana. Ny lohan'ny paompy dia matetika vita amin'ny fitaovana plastika, ary ny firafitra eo anelanelan'ny plastika sy ny plastika dia mihidy mafy kokoa ary mafy orina, manidy mafy ny rivotra ary tsy dia mitete. Ny fahamafisan'ny rivotra amin'ny plastika sy ireo fitaovana hafa dia somary mahantra, ary ny fitaovana hafa dia miraviravy kokoa ary sarotra ny manamafy;
6. Fampisehoana lafo. Tavoahangy plastika mamono fitaovana hafa amin'ny fahombiazan'ny vidiny.
Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd no mpanamboatra, fonosana avana Shanghai dia manome fonosana kosmetika tokana ajanona.Raha tianao ny vokatray dia afaka mifandray aminay ianao,